Uyibhala njani inoveli: inkqubo yokuhlola kwakhona kunye novavanyo | Uncwadi lwangoku
Xa sithetha ngazo uphononongo nokulungiswa Sithetha ngenkqubo edibeneyo ekufuneka siyenzile ngezigaba ezibini ezahlukeneyo: ukuhlaziywa nokulungiswa kwento esiyibhalayo (umzekelo ekupheleni kwesahluko ngasinye nakwiseshoni nganye yokubhala) kunye nohlaziyo lokugqibela nokulungiswa, xa sele ndigqibile ingxelo yokuqala ye umdlalo.
I nyaniso ukungawushiyi lo msebenzi okokugqibela kunokwenza izinto zibe lula kakhulu kuthi. Kuyenzeka ukuba ngamanye amaxesha sithathe umbono, kwaye le nto siyibhalileyo namhlanje nanamhlanje siyayithanda, mhlawumbi kuba senze nje umzamo omkhulu, mhlawumbi ngenxa yokuba iadrenaline yomzuzu, Mhlawumbi ngomso singayiphucula okanye singacinezelwa ngokuthe ngqo. Kungenxa yoko le nto uhlaziyo kunye nokulungiswa kwemini elandelayo, kwimeko ezininzi kuvavanyo lokwenene lomqhaphu: awazi ukuba into oyibhalileyo ilungile de uyifunde kwakhona emva kokuba ulele.
Enye into enokuba luncedo olukhulu kukuba ugxeke njengoko sihamba, Oko kukuthi, funda isivakalisi ngasinye okanye isiqendu ngasinye amaxesha amaninzi ngaphambi kokudlulela kwesilandelayo, ngaloo ndlela umisela isihluzi sokuqala esiza kwenza lula umthwalo wokugqibela wokulungisa. Nangona kunjalo, oku akuyonyani kuzo zonke iintlobo zababhali njengoko uninzi luphulukana nenkuthazo kwaye bakhetha ukwenza indawo yokulahla inkunkuma yokuqala besazi nokuba kamva baya kuyipolisha ngamandla ngakumbi. Umbhali ngamnye wahlukile kwaye sonke kufuneka sifumane eyethu indlela yokusebenza.
Uhlaziyo lokugqibela kunye nokulungiswa, kubalulekile ukuzola kwaye ungathatheki yiminqweno. Kwabo bagqibileyo ukubhala inoveli, ixesha alikafiki lokuba bayipapashe, kwaye ihlala iyimeko abayifunayo kwaye bafuna ukuphumla kuyo kwaye kwezinye iimeko behle baye kusebenza nenye iprojekthi esele benayo engqondweni. Nangona kunjalo, kungcono ukuba unganikezeli kumnqweno kwaye uthathe ixesha lokuwujonga kwakhona, uwulungise kwaye uwutyebise kangangoko kufanelekileyo: lowo ngumboniso wentlonipho kuwo wonke umsebenzi ubani athe wawela ukuya kuwo.
Kananjalo akufuneki sibenendawo yokuhlala kwindawo yokugcina izintoOko kukuthi, ngamanye amaxesha siyabona ukuba indawo ethile inokuphuculwa okanye inokucinezelwa kodwa sonqene ukwenza ngaphandle kwayo. Sicinga ukuba oku kuwuhlonipha umsebenzi wethu, kodwa emazantsi ayisiyonto iphosakeleyo kuba asizukubonelela ngeyona nto yethu.
Okokugqibela, ngaphambi kokuzama ukuthumela, Akukhathazi ukucela uncedo lwangaphandle ukufumana ezinye iimbono zangaphandle ezinokuthi zifeze ezethu. Ukwenza oku, sinokuqala ngokutsalela kubahlobo bethu abanomkhwa wokufunda kunye neendlela zabo esizithembileyo, sibacela ukuba banyaniseke kwaye baziqaphele zombini ezi mpumelelo, ukuze bakwazi ukuziphucula, kunye neempazamo, bakwazi ukuzilungisa. . Sinako nokuya kubavavanyi abavavanyiweyo ukuze siphucule umsebenzi wethu ngaphambi kokuwuthumela kubapapashi. Kwimeko yokuba nethamsanqa ngokungenisa kwaye omnye wabo uyakhuthazwa ukuba apapashe umsebenzi, uya kubeka uthotho olutsha lweefilitha ekufuneka inoveli ipasile, nabantu abaliqela umsebenzi wabo kukufunda kwaye bacebise utshintsho ekufuneka lwenziwe.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba amaxesha amaninzi baya kuthi bacebise utshintsho esingazithandiyo kakhulu kwaye ngamanye amaxesha abanye esibona ukuba bayasityebisa: akufuneki siwele kwikratshi lokuvala iindlebe kwizindululo, kodwa kungabikho sono sokungabikho ubuntu kunye nokususa okanye ukutshintsha yonke into ebuzayo ukuba oku kuyaphikisana nemigaqo yethu yobuhle. Umntu kufuneka azive ekhululekile ngesiphumo sokugqibela sokuba utyikityo lwakhe luza kuthwala kwaye ahloniphe uluvo lokuba umntu ufuna ukufaka into yinto ebalulekileyo xa kupapashwa nawuphi na umsebenzi woncwadi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Uyibhala njani inoveli: inkqubo yovavanyo yokulungisa iimpazamo kunye novavanyo